Semalt: Advantages WordPress Plugins
WordPress plugins no tena manintona sy mahasoa indrindra ho an'ny webmaster na bilaogera. Amin'ny alàlan'ny plugin iray, ireo mpikirakira web sy designer dia afaka manampy mora foana ny fahafaha-miasa sy ny fifanakalozan-dresaka amin'ny tranonkala mihoatra ny votoatiny ao amin'ny pejy rehetra. Na tsy maintsy mamorona endrika fifandraisana tsotra, na lalao video, na mpilalao blocker sy ny mpiloka ianao, ny plugins dia fomba tsotra sy matanjaka hahazoana ny zavatra vita.
Eto Ross Rossber, manam-pahaizana ambony indrindra Semalt , no niresaka momba ny tombontsoa 10 tsara indrindra amin'ny WordPress plugins.
1. Mora ampiasaina ny plugins
Ny Plugins WordPress dia mora ampiasaina ary manana ny interface interface izay mahatonga azy ireo ho manan-danja amin'ny karazana tranokala rehetra. Azonao atao ny mametraka mora foana ny lahatsoratry ny bilaogy, sary, ary interactivité ao amin'ny tranonkalanao ary mora atao ny manao izany, na minitra vitsy monja aza ary mampihena ny fotoana fametrahana azy.
2. Mora amin'ny fidirana amin'ny fitaovana rehetra
Ny ampahany tsara indrindra dia ny plugins plugins afaka jerena amin'ny fitaovana rehetra. Na mampiasa ny solosaina finday na smartphone ianao, afaka manitsy na manamboatra / manentana plugin ianao ary miditra amin'ny tranokalanao raha vao mifandray amin'ny Internet izany.
3. Tsy ilaina ny fanitsiana HTML
Rehefa avy nametraka plugins manan-danja ianao, tsy mila editor na HTML na FTP rindrambaiko mba hahazoana ireo zavatra vita. Ireo plugins ireo dia tsara ho an'ny tranonkala static sy tsy statistika, ary tsy mila manitsy ny code HTML ianao raha vao nametraka plugin ianao.
4. Miaraka amin'ny milina fikarohana
Ny Plugins WordPress dia mifanaraka amin'ny motera fikarohana indrindra indrindra fa Google sy Yahoo ary mahatonga azy io ho mora kokoa amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny tranonkala. Ankoatra izany, ny pejy rehetra, sary, lahatsoratra, lohateny ary famaritana dia voasokajy ao amin'ny
5. Mifehy ny tranonkala ary manova ny fijeriny
Ny ankamaroan'ny webmaster sy ny mpitoraka bilaogy dia tsy mahafantatra fa ny WordPress plugin dia afaka manampy azy ireo hanova ny fametrahana ny tranokalany. Midika izany fa afaka mampiasa tranokala maro araka izay azo atao ianao ho an'ny tranonkala mahazatra sy tsy misy herisetra.
Ny iray amin'ireo fepetra lehibe amin'ny mpampiasa amin'izao fotoana izao dia ny fampifanarahana. Isika rehetra dia mitady sehatra izay mamela antsika hanana tranokala feno. Ny Plugins WordPress dia manome fahafahana antsika ary hampiasa mpampiasa maro hatrany amin'ny blôgintsika sy ny tranonkala.
7. Vonona hampiasa
Marina fa ny asa fitorahana blaogy dia asa goavana ary tsy afaka ny hamolavola ny plugins anao ianao. Amin'ny toe-javatra toy izany, afaka mametraka mora foana WordPress plugins ianao ary manomboka amin'ny tranonkalanao. Manana fahaiza-manao sy fiasa samihafa izy ireo, ka mahatonga azy ireo ho mora sy haingana.
8. Ampitomboy ireo fonosana amin'ny fifantenana
Satria misy karazana WordPress plugins, dia mora ho an'ny olona rehetra ny manatsara ny endriky ny tranokala na ny bilaogy amin'ny karazany tsara. Azonao atao ny manampy be dia be na plugins kely ao amin'ny tranokalanao araka izay tratra ary manao azy io ho matihanina sy tsara kokoa noho ny teo aloha.
9. Fanampiana plugins manampy ny orinasa
Marina tokoa fa manampy ireo tetikasa WordPress ny fampiroboroboana ny orinasa. Raha ny tranonkalanao dia miezaka manamboatra sy mikambana, dia miharihary fa ny mpitsidika rehetra dia ho lasa mpanjifa sambatra.
10. Ny fahafahan'ny mpampiasa maromaro
Amin'ny maha-admin anao dia afaka manampy olon-maro amin'ny tranonkalanao WordPress araka izay tianao ianao. Azonao omena andraikitra samihafa izy ireo ary manome azy ireo karazana fitarihana mampiasa ireo Plugins WordPress Source .